Agustí Benedito oo niyadjabiyay taageerayaasha Barcelona kaddib markii uu ka hadlay arrimo la xiriira Messi – Gool FM
(Barcelona) 26 Nof 2020. Musharax u taagan xilka madaxweynaha Barcelona ee Agustí Benedito ayaa niyadjabiyay taageerayaasha kooxda kaddib markii uu ka hadlay arrimo la xiriira mustaqbalka Lionel Messi ee xilliyada soo socda.
Lionel Messi ayaa bisha Janaayo ee sanadka cusub inuu miiska wada hadalka la fariisto kooxda uu doono, haddii aysan wax isbadalin isa markaana uusan saxiixin heshiis cusub uu ku sii joogayo garoonka Camp Nou.
Musharax u taagan xilka madaxweynaha Barcelona ee Haddaba Agustí Benedito ma uusan ka qancinin taageerayaasha kooxda Barcelona arrinta ku saabsan qandaraas kordhinta Lionel Messi.
Haddaba Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa daabacay hadalada Agustí Benedito kaddib wareysi uu bixiyay, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan dareemayaa in ku qancinta Messi fikradda ah inuu saxiixo qandaraas cusub, ay noqon doonto arrin adag.”
“Messi wuxuu go’aansaday inuu ka tago kooxda, wuxuuna u muujiyay rabitaankiisa si cad”.
“Inaan maqalno Leo oo kala hadlay arrintaas Barcelona, waa wax aad u xoogan, dabcan waxaas oo dhami waxay ahaayeen wax walba oo dhacay.”
“Go’aanka Messi, ee uu qaatay xagaagii, waxaan u arkay inuusan noqon mid bilaa micno ah, waa go’aan si taxaddar leh looga fiirsaday, marka waxaan dareemayaa rajo xumo ku saabsan arrintan.”
“Guddiga maamulka cusub way ku adkaan doontaa inay ka dhaadhiciyaan inuu sii joogo, laakiin Lionel wuxuu waligiis taageere u noqon doonaa Barca.”
Maxay ahayd sababtii Mareykanku uu ugu diiday Maradona inuun dalkooda sii joogo... (26-sano ka hor iyo dhacdadii Koobka Adduunka)